Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Filipina tamin’ny Jolay 2011
Filipina · Jolay, 2011
Tantara mikasika ny Filipina tamin'ny Jolay, 2011
18 Jolay 2011
Lahatsary: Tortillas, Chapatis, Mofo Sy Maro Hafa Manerana Izao Tontolo Izao
Betsaka amin'ireo kolontsaina no mampiaraka ny sakafony amin-javatra vita avy amin'ny voamaina; mofo, biskoitra sy karaza-mofo nahandroina tamin'ny entona no tena isan'ny sakafon'ny olna amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao. Androany isika dia hitsidika mpiangaly sy mpahandro mba hijery ny fomba fikarakaran-dry zareo sy fanaovany ny sakafo fanomeny ny...
Mpanoratra Karlo Mongaya · Tontolo_iainana
Filipiana maro no notampohan’ilay safo-drano goavana izay namely ny ilany atsimon’i Davao renivohitr'i Filipina. Malaza ratsy amin’ny fisiana safo-drano tselatra i Filipina, antony mahatonga izany ny fisiana rivo-doza maro mandalo amin’io firenena io avy any amin’ny ranomasimbe Pasifika. Nefa lazaina fa hoe miorina eo amin’ny faritra fandalovan’ny rivo-doza ny tanànan’i...
04 Jolay 2011
Filipina: Adihevitra Mikasika ny Volavolan-dalàna Momba Ny Fisarahana Am-Panambadiana
Mpanoratra Julius Rocas · Fivavahana
Miaraka amin'ny fankatoavana ny fisarahana am-panambadiana any Malta, i Filipina izany sisa no firenena tokana mandràra azy io manerana izao tontolo izao. Misy adihevitra mafàna amin'izao fotoana momba ny hoe fotoana ve izao sa tsia handdaniana lalàna momba ny fisarahana am-panambadiana izay toherin'ireo ambaratongam-pitondrana samihafa manana ny tanjany ao amin'ny...